Fano RAZAFIMAMONJIRAIBE : Sarotra ny manangana orinasa ka ilàna fahavononana – Blaogin'i Voniary
Isaky ny alakamisy fahatelon’ny volana dia miantso mpandraharaha iray ny « Le Centre d’Excellence en Entrepreneuriat » ao amin’ny ISCAM mba hifampizara traikefa amin’ny mpanatrika. Tao anatin’izany indrindra no nitondran’i Fano RAZAFIMAMONJIRAIBE, mpiara-managana sy tale jeneralin’ny TORIO Creatives, ny lohahevitra hoe : « ny fahasarotan’ny fananganana orinasa ». Marihina moa fa tamin’ny teny gasy ny fifanakalozan-kevitra.
Voniary: Mba lazao fohifohy hoe ny momba ny TORIO Creatives ?
Fano RAZAFIMAMONJIRAIBE: Izahay dia orinasa mikatroka eo amin’ny sehatry ny serasera. Izany hoe ny resaka dokambarotra sy fikarakarakarana hetsika no ataonay, ka sahaninay avokoa na famoronana sary, feo, horonan-tsary, takelaka tranonkala sy ny maro hafa. « Agence 360° » moa no fiantso azy noho izy mahasahana ny serasera amin’ny endrika rehetra. Efa telo taona izao no niorenanay ary tanora dimy mianadahy izahay no miara-mitantana.
V: Inona no tena sakana lehibe amin’ny fananganana orinasa eto amintsika ?
FR: Raha vao miresaka fandraharahana dia vola no tonga ao an-tsain’ny maro. Marina tokoa fa raha nanatona ivon-toerana mpampindram-bola madinika izahay dia tsy nahazo valiny mahafapo. Ireny manko tsy manome vola raha tsy efa mitsangana ny orinasa ary manana trano na tany atao antoka ianao. Amiko anefa sarintsarin’olana ihany ny tsy fisian’ny vola satria betsaka ny fomba mety ahazoana famatsiana. Ao ireo tetikasa maro manohana ny fandrarahana amin’izao fotoana izao. Tsy vitsy koa ireo olon-tsotra vonona hampiasa ny volany ary misy mihitsy aza ireo mahafoy vola tsy mitady tambiny sy tsy mila famerenana. Noho izany azo lazaina hoe fialan-tsiny fotsiny ny filazana hoe sakana amin’ny fananganana orinasa ny tsy fisian’ny famatsiana ara-bola.
V: Inona ary no tena olana ?
FR: Inty misy ohatra iray, misy tanora iray manana nofinofy hivarotra mofo gasy. Nanatona mpamatsy vola izy ka nilaza izany vinavinany izany sy naneho ny fikasany hindram-bola. Misy tanora iray hafa indray manana tetikasa mitovy amin’izany sady novelabelariny tahaka izao rehefa niresaka tamin’ilay mpamatsy vola izy : « efa nitety mpivarotra koba aho ary nahita anankiray afaka manome fihenam-bidy raha maka maro. Efa nijery toerana koa aho ka misy efitrano amoron-dàlana izay hitako mety hanaovana tsena. Manaraka izany, efa nifampiresaka tamin’ilay namako iray izay aho fa afaka manome lasitra fanaovana mofo gasy izy. Ny vola entina ampihodinana ny tsena izao no tadiaviko. » Iza hoy ianao no mety ahazo famatsiana amin’izy roa ireo ? Ilay faharoa mazava ho azy ! Ny azy efa misy tetikasa mipetrapetraka tsara ka maharesy lahatra kokoa. Ny an’ilay voalohany toa nofinofy fotsiny. Izany no olan’ny tanora malagasy matetika : mijanona ho nofinofy fotsiny ihany ilay hevitra hanangana orinasa fa tsy misy dingana natao akory.
V: Mandeha ho azy izany zava-drehetra rehefa mahita vola ?
FR: Tsy mora mihitsy ny manangana sy mitantana orinasa. Zavatra roa lehibe no ilaina mba hampizotra antsakany sy andavany ny tetikasanao. Voalohany ny fotoana. Mila fotoana fiomanana ianao : hamolavolana hevitra sy hametrahanao izany amin’ny antsipirihany ao anaty « business plan ». Rehefa mitsangana ny orinasa dia takiana koa ny faharetana satria afaka telo taona eo raha haingana indrindra vao mahazo tombom-barotra ary miakatra tsikelikely izany. Faharoa manaraka izany, mila fahalalana ny fananganana orinasa. Avy amin’ny fianarana natao sy ny traikefa no ahazoana ny fahalalana fototra. Tokony hatevenina lalandava amin’ny alalan’ny famakiana boky sy ny fikarohana izany. Ny tsara indrindra dia fantatrao amin’ny antsipirihany izay sehatra irotsahanao : ny momba ireo orinasa mpifaninana, ny mpandraraha nahomby ary ny zava-baovao.
V: Hafatra ho an’ny mpamaky ?
FR: Sarotra ny manangana orinasa fa rehefa manana finiavana ianao dia tsy maintsy mahomby. Zava-dehibe ihany koa ny fahaizana mankafy ny dia. Misy karazany roa ny olona rehefa mandeha fialan-tsasatra, alaintsika ohatra hoe, ho any Toamasina. Ny voalohany, rehefa tonga eo amoron-dranomasina iny izy izay vao mahatsapa fa ao anatin’ny fialan-tsasatra. Ny faharoa kosa, vao manomana ny diany izy dia efa feno hafaliana avy hatrany ary eny an-dàlana izy dia efa mahita tsirony. Io faharoa io no tsara alaintsika tahaka eo amin’ny sehatry ny fandraharahana. Tsy hoe rehefa lasa ilay telo taona voalohany izay sokajiana hoe mafy indrindra vao lazaina hoe tafatsangana ny orinasa. Marina fa betsaka ny ady sy sedra lalovana ao anatin’io telo taona io fa misy fandresena madinidinika koa eny antsefatsefany eny. Ireny dia natao hahafaly sy hanome ainga vao iatrehana ny ady manaraka.
fandraharahana, hanangana orinasa, mpandraharaha, mpandraharaha malagasy, orinasa malagasy, tanora mpandraharaha
Un commentaire sur “Fano RAZAFIMAMONJIRAIBE : Sarotra ny manangana orinasa ka ilàna fahavononana”
Marina mihitsy izany! Betsaka ny manao « ariary zato am-pandriana »!